Fampielezan-kevitra: mampitandrina ny mpiasam-panjakana ny DFP | NewsMada
Fampielezan-kevitra: mampitandrina ny mpiasam-panjakana ny DFP
“Mampitandrina ny mpiasam-panjakana alaim-panahy hanao kandidàm-panjakana na hanohana kandidà izahay fa mazava ny voalazan’ny lalàna: ankoatra ny hoe foana ny voka-pifidianana azon’ny kandidà tohanany, mety hahazo figadrana sy fandoavana lamandy ihany koa izy.”
Io ny nambaran’ny mpitarika ny hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), Ratolojanahary Maharavo, tany Antsiarabe, faritra Vakinankaratra, afakomaly, momba ny fanaovana fampielezan-kevitra, araka ny fehezan-dalàna lah. 2018-008, tamin’ny 11 mey 2018.
Aompan’ny DFP amin’ny fanaraha-maso ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin’ny fampielezan-kevitra ny heriny rehetra. Manomboka amin’ny 8 oktobra izany, hatramin’ny 7 novambra: hanara-maso ireo mpiasam-panjakana manao fampielezan-kevitra sy ny fitaovam-panjakana ampiasaina amin’izany ny DFP.
Ny fahatsapan’ny DFP ny ataon’ny mpitondra fanjakana mandritra ny fifidianana hatramin’izay ny anton’ny hanaovan’izy ireo izay fanaraha-maso ny mpiasam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana izay, araka ny fanazavany. Olona roa isaky ny distrika no hapetrak’izay ireo amin’izany.
Tsotra ny ny fomba fiasana: alain-tsary izay mpiasam-panjakana manao fampielezan-kevitra, na ny fitaovam-panjakana ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. Hitondrana olom-pirenena roa manana kara-pifidianana izany. Atao “photocopie” izay, ary entina any amin’ny DFP izay hiantoka ny fametrahana azy any amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC).